Torohevitra mahasoa sy tranga avy amin'ny famelomana amin'ny fomba hisakanana ny fifamoivoizana sandoka sy ny bots
Ny antonta dia mampiseho fa maherin'ny 36% ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokala dia sandoka. Nandritra ny volana vitsy lasa, ny fifamoivoizana sy ny varotra varotra dia nitarika ho amin'ny firoboroboan'ny orinasan-tserasera maro. Araka ny hevitr'ireo tetikasa, ny bots, ny tranonkala, ary ny fifamoivoizana sandoka dia vokatry ny fomban-drazana sy ny sora-baventy novokarin'ny mpanakorontana sy ny spammers.
Ny fifamoivoizana sandoka dia singa manan-danja izay nandraketana ny angon-drakitra antserasera. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny fitohanana fifamoivoizana, ny tranonkala ary ny fifamoivoizana anatiny dia mampitombo ny fifamoivoizanao amin'ny 50%, ka mamadika ny tatitra Google Analytics anao. Mety hampatahotra mafy ny hahatsapa fa 350 amin'ireo mpitsidika 580 no trosa sy bots. Ireto misy tranga vitsivitsy nataon'i Julia Vashneva, Semalt Mpitarika Success Success Manager, momba ny fomba hanakanana ny fifamoivoizana sandoka, ireo robots fantatra, ary ny tranonkala amin'ny Google Analytics:
Sokafy ny navigateur ary atomboy ny kaontinao GA
Tsindrio ny 'All Website Data' icon ahafahana mijery ny data Google Analytics
Ambonin'ny pejy eo amin'ny pejy misy anao, tadiavo ary tadiavo ny 'Admin' icon
Tsindrio ny pejy fahatelo amin'ny kaontinao ary tsindrio ny 'View Settings'
Avereno ny GA anao ary fidio ny fizarana 'Bot Filtern'
Tsindrio ny 'Hanafoana ny hitsikerana rehetra fantatry ny spiders and bots'
Tsindrio ny bokotra 'Save' eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery
Tsindrio ny zana-tsipika amin'ny anaran'ny tranonkalanao mba handehanana
Torohevitra mikasika ny fomba hanakanana adiresy IP
Ny fanakanana ny adiresy IP dia tena manan-danja tokoa raha toa ka mijery fikarohana fikarohana izany. Fomba vitsivitsy izay hanampy anao hiatrika ity asa ity:
Manomboha ny navigateur ary midira ao amin'ny kaontinao GA
Fidio ny 'All Website Data' icon mba hijery ny angon-tranonkalan'ny site
Tsindrio ny bokotra 'Admin' eo an-tampon'ny pejyo
Tsindrio ny 'All Filters' icon
Tsindrio ny bokotra 'Add a filter vaovao' mba hamoronana fomba fijery vaovao
Mampiasa tranokala hafa, manomboha ny programa Google
Mitadiava adiresy IP ary adikao ny adiresy
Diniho ny kaontinao GA, ary apetraho hoe 'voadio' ny anaranao
Tsindrio ny 'Destination' icon
Atolory ny adiresy IP ao anaty boaty omena ary tsindrio ny bokotra 'Add Box'
Tsindrio ny bokotra 'Save' mba hanafoanana ny adiresy IP
Torohevitra mikasika ny fomba hanakanana andian-jatony sy bots ireo mpivarotra
Mitana andraikitra sy fahamalinana ny fisakanana ny tranokala tranokala sy ny fifamoivoizana sandoka. Tsy tianao ny raharaham-barotra an-tserasera mba hiatrika fifaninanana mafy sy ny lahatahiry miovaova ao anaty algorithm. Ireto misy toro-hevitra momba ny fomba hanakanana fifamoivoizana sy mpanangona sandoka toy ny spam-button-for-web na Darodar:
Atomboy ny kaontinao GA sy ny fandraiketana
Mamorà fomba fijerin'ny sivana vaovao
Ampio ny anaran'ny mpamadika
Mametraka 'endriny' ho toy ny sivana
Ampidiro ny modelin'ny sivana ao amin'ny format com.
Tsindrio ny bokotra 'Save' mba hanafoanana ireo botswana rehetra fanta-daza sy tranonkala amin'ny statistika GA
Ny famoahana ireo antontam-baovao madio sy marina ao amin'ny tatitra Google Analytics dia sehatra iray mampiseho fa manatanteraka fitadiavana fikarohana maharitra maharitra ianao. Aza avela hampidi-doza ny fifamoivoizana, ny bots, ary ny tranonkala misy anao. Manakana ny fifamoivoizana sandoka amin'ny fampiasana ireo trompetra voalaza etsy ambony Source .